२५ प्रतिशत नेपालीमा मुटुको समस्या « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
कहिल्यै आराम नगर्ने तपाईंको संवेदनशील अंग मुटु स्वस्थ छ ? छैन भने जीवनशैली सुधार्नुहोस्। मुटु स्वस्थ हुँदा कोरोना संक्रमण भइहाले पनि रोगसँग लड्न सजिलो हुन्छ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राडा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ मुटु जोगाउँदा कोरोना संक्रमणबाट जुध्न सहज हुने बताउँछन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे मुटुका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले मुटु जोगाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमध्ये झन्डै ६० प्रतिशतमा मुटुजन्य समस्या पाइएको डा. पाण्डेले बताए।, याे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्टमा छापिएकाे छ ।
प्रकाशित मिति : आश्विन १४, २०७७ बुधबार ९ : २४ बजे